Ndeipi piritsi yakanakisa? Iwo mamodheru anomira zvakanyanya muna 2022
Ndeipi tablet yandinotenga? Ndeipi piritsi yakanakira zvandinoda? Chokwadi vanopfuura mumwe wenyu vakazvibvunza mibvunzo iyi vasati vatenga piritsi renyu.
Kusarudza iyo yakanakisa piritsi yezvaunoda chaizvo haisi nyaya iri nyore. Isu tinofanirwa kufunga nezve saizi yechidzitiro, sisitimu yainoshandisa kana mutengo wayo. Iwe unoda here piritsi rekutsiva laptop yako kana sewedzero yekusevha internet uchiona yakanyanya kufinha TV show? Tsvaga piritsi rinokurudzirwa zviri nyore.
1 Kuenzanisa mahwendefa akanakisisa
1.1 Yakanakisa piritsi: iPad PRO
1.2 Yakanakisa 10-inch Android piritsi: Samsung Galaxy Tab S7
1.3 Yakanakisa 8-inch piritsi: iPad Mini
1.4 Yakanakisa yezvakachipa: Huawei Mediapad T5
1.5 Zvakanakisa zvevadiki: Amazon Fire HD 8
1.6 Yakanakisa 10-inch Android: Galaxy Tab S6
1.7 Yakachipa yakachipa yakasanganiswa: Lenovo Duet 3i
1.8 Yakanyanya kusanganiswa: Microsoft Surface Pro 7
2 Yakanyanya kutamba: Nvidia Shield
3 Ndeapi maficha anofanirwa kuve neyakanakisa piritsi?
3.3 Mikana yekubatanidza keyboards
3.4 Kugona kubatanidza peni kutora manotsi
3.5 PC basa
3.6 Ratidza panel uye resolution
3.8 Minimum RAM
4 Mhedziso pane iyo yakanakisa piritsi
4.1 Isu tinoedza sei mahwendefa akanakisa?
Kuenzanisa mahwendefa akanakisisa
Chero zvaunofarira, muchidimbu chedu tichakuudza kuti ndeipi piritsi yakanakisa.
Kana iwe uchida kuramba uchifambirana nenguva, kune mibvunzo yakawanda yekupindura, iyi ingori mimwe yayo, ye ndosaka tichikurudzira kushanya kwemapiritsi akanakisa kuti tive nechokwadi chekuti iwe unogona kusarudza iyo piritsi yakakunakira iwe. Zvingodaro, hauna nguva yekuverenga chinyorwa chizere, heano mamwe maitiro aunofanirwa kufunga usati watenga.
Chinhu chekutanga kufunga ukuru uye mutengo. Iwo makuru Mahwendefa gumi emasendimita Iwo akanaka kana iwe uri kumba, asi vadiki vanonyanya kusununguka kupfeka - vakanaka kutora panzendo dzedu. Kana mubvunzo wako uri wepi piritsi randinotenga kutsiva laptop yangu, saka zvakakodzera kufunga kutenga imwe convertible tablet. Vamwe, seMicrosoft Surface Pro, kana iwe uri pabhajeti repamusoro chinhu chinotakurika chinotakurika chinogadzira zvakanyanya. Isu takasanganisira mamwe emhando yepamusoro mahwendefa, seakanakisa evana (uye kwete vadiki) kutamba vachitenderedza.
Yakanakisa piritsi: iPad PRO
2020 Apple iPad Pro (kubva ...
11-inch 2048 x 1536 pixel resolution IPS skrini
Iyo iPad Pro yaive piritsi yakanaka uye isu takada kuishandisa mukati megore rino rapfuura. Nekudaro, nguva yayo pane yedu runyorwa rwemapiritsi akanakisa yasvika kumagumo nekuti iPad Pro iri pano uye inopa tekinoroji yepamusoro kupfuura yekutanga modhi pasina kubhadhara kupfuura izvo mahwendefa eApple ekupedzisira anowanzo kudhura.
Mune maonero edu, chinhu chinonyanya kufadza iApple A12Z CPU, iyo inopa simba rakawanda rakawedzerwa. Izvo zvichaitwa nevagadziri nazvo zvinoramba zvichionekwa, asi icho chikamu chekunakidzwa. Apple yakavandudzawo kamera yekumashure kufunga kwevose vanoda kutora mapikicha ezororo nepiritsi ravo. Hatisati taburitsa ongororo yedu izere yePad PRO parizvino, asi zvese zvatakaona kusvika zvino zvinotiudza kuti zvakakosha kutenga. Tsvaga yedu yekuenzanisa gwara chii iPad kutenga.
Yakanakisa 10-inch Android piritsi: Samsung Galaxy Tab S7
11-inch 2560x1600 pixel resolution Super AMOLED kuratidza
Snapdragon 865 Plus Quad Core processor
Iyo Samsung Galaxy Tab S7 ihwendefa rinoshamisa, uye ikozvino kuti mutengo wayo wadzikira zvishoma mushure mekuva pamusika kwechinguva, zvakatowanda. Chinonyanya kusiyanisa piritsi iyi kubva kune yese skrini yayo.
Iri nderimwe remahwendefa mashoma ane Super AMOLED skrini, inopa musiyano uri nani pane chero LCD piritsi. Iyo Samsung Galaxy Tab S2 zvakare yakanyanya slim uye inopa akasiyana maficha mapakeji. Iyo ine microSD, Wi-Fi ac, MHL, pakati pezvimwe zvinhu. Izvi zvinhu zvausingazotore kubva kuPad ​​Air. Uye zvakare, ine chigunwe chemunwe scanner chakavakirwa muchiratidziro.
Iyo tsika Android interface ye Samsung havasi vose vanozvifarira, zvisinei, zvinokubvumira kuti uite zvakawanda zvekugadzirisa.
Yakanakisa 8-inch piritsi: iPad Mini
7,9-inch 2048 x 1536 pixel resolution IPS skrini
Iyo iPad mini yatove pamusika uye inomiririra mutsauko wakakura mukuita zvichienzaniswa nePad Mini 4 uye iPad Mini 3, iyo yakambosiyana kubva kune imwe neimwe uye yatove yakaoma kuwana pamusika.
Uyu mukana wakanaka, kunyanya kana iwe uchipedza imwe nguva uchitsvaga uye uchienzanisa zvinopihwa. Zvikuru, iwe uchiri kuwana iyo yepamusoro-yekupedzisira kunzwa kuvonga kune yakajairwa Apple aluminium casing uye yayo yakakwirira-resolution Retina kuratidza. Kana iwe uchinetseka kuti ndeipi piritsi yakanakisa, usazvinetse kuti piritsi rako richange ratobuda munguva pfupi pfupi nekuti modhi nyowani, iyo iPad Air 2020, ine processor inongori chizvarwa chimwe pamberi, saka ichiri yasara. makore akati wandei ehupenyu kune iyi piritsi.
Yakanakisa yezvakachipa: Huawei Mediapad T5
10,1-inch 1920 x 1200 pixel resolution IPS skrini
Iyo Huawei Mediapad T3 chizaruro pakati pemapiritsi akachipa. Iwe unozokatyamadzwa nezvaunowana nezve € 180, ruzivo rwainopa rwuri nani kupfuura neiyo yapfuura modhi. Ndiyo yakanakisa yakachipa Yakazara-HD piritsi brand yatakaongorora.
Isu tinoda yayo 10,1-inch skrini inoita kuti mafirimu nemitambo zvive zvakanyanya cinematic. Saizi nyaya uye Huawei mahwendefa emhando Zvinoita sekuti iri kuishandisa sechipo chehoko, senzira yekubatanidza nzvimbo yayo mudzimba. Tsanangura? Pamwe, asi kana isu zvakare tiine mukana wakazara kune zvese zvine chekuita ne-Android, isu tichafara kubira.
Zvakanakisa zvevadiki: Amazon Fire HD 8
Hwendefa Moto HD 8, ...
8-inch 1024 × 600 pixel resolution IPS skrini
Unofunga kuti mapiritsi anotangira pamainji manomwe here? Funga futi. Amazon yakagadzira piritsi remasendimita manomwe, mutengo wakaderera unoita kuti ive sarudzo iri pachena kune avo vari kutsvaga piritsi rekutanga revana vavo. Nekudaro, hapana chikonzero chekuitenga chete kune mudiki, sezvo iri piritsi rakanakisa remutengo uyu watakaona kusvika nhasi. Yayo IPS skrini yakanaka chaizvo, ine resolution yakati pasi pane 720p inopa mufananidzo wakapinza kupfuura akawanda manomwe-inch mahwendefa emutengo iwoyo.
Inoshandisa iyo Fire OS inoshanda sisitimu pachinzvimbo che "yakajairika" Android, zvinoreva kuti piritsi iri inzira iri nani kune avo vasina hanya nekubhombwa neAmazon masevhisi akadai seAmazon MP3 kana Amazon Instant Vhidhiyo. Pamusoro pezvo, ipiritsi rakakora uye rinorema, asi mutengo waro unoita kuti ive yakakosha kune avo vanoshamisika kuti ndeipi piritsi yakanakisa, iyi ndeimwe yeakanakisa sarudzo dzeyepasi renji ine mhando yeAmazon. Kana iwe uchinetseka kuti ndeipi piritsi yekutenga, iyi inogona kunge iri sarudzo yakanaka.
Yakanakisa 10-inch Android: Galaxy Tab S6
10,4 inch AMOLED skrini
Eight yakakosha processor
Ndiye mukoma mukuru weGalaxy Tab S6. Kubatsira kwayo kukuru ndiko ine chinyorwa chepamusoro chemapiritsi ese.
Chisarudzo chepamusoro che AMOLED skrini yakanakira kuona mafirimu chero kupi. Mukuwedzera, iwe uchaona akawanda nekuti iyo hupenyu hwebhatiri, anenge maawa gumi nemana, zvinoreva kuti iwe uchava nesimba rakakwana kuti unakidzwe kunyange nendege refu.
Kana iwe uchida kuwana zvakanyanya kubva pachiratidziro, isu tinokurudzira kuti iwe uvhare iyo yekuratidzira yekuchinjisa basa sezvo isingaite zvakawanda zvine musoro uye inoita kuti mavara ataridzike akaipa.
Iyo Galaxy Tab S6 haina iyo yakasarudzika dhizaini asi ine mukana wekunyanya kuonda uye kureruka. Muchokwadi, inorema zvakangofanana neiyo iPad Pro asi ine yakakura zvishoma skrini uye mashoma bezels kuita zvirinani kushandisa nzvimbo.
Nehurombo, iyo mushandisi interface ye Samsung Magazine inyaya yekunetsa uye haipe kudzika kweapp maficha aunowana kubva kune akajairwa Android majeti. Izvi hazvina basa zvakanyanya kana zvichigona kuremara.
Sezviri mu8,4-inch vhezheni, scanner yemunwe haina kunyanya kubatsira, asi hazvireve kuti piritsi iri yakanakisa 10 inch Android piritsi.
Yakachipa yakachipa yakasanganiswa: Lenovo Duet 3i
10.3-inch 1920 × 1200 pixel resolution IPS skrini
Kiyibhodhi dock clip inosanganisirwa
Kana iwe uchida kushanda uchishandisa piritsi, tinokurudzira kutsvaga imwe inokubvumira kuti ubatanidze keyboard. Kana, nekuwedzera, iwe uchizonyora zvakawanda, Windows inogona kunge iri sarudzo iri nani pane Android. Kana izvi zviri izvo zvaunoda, the lenovo tablet Miix ndiyo yako yakanakisa sarudzo.
Ikozvino yave kuwanikwa ne400 € chete, ine chaiyo laptop-style keyboard, bhatiri rinogara kwenguva refu, uye zvese zvakanaka zvehwendefa. Izvo chete asi ndezvekuti pamwe iyo skrini haina kunaka senge yemamwe mahwendefa anokurudzirwa, kugadziriswa kwayo kwakadzikira uye iwo mavara ari duller. Kana iwe uchida chimwe chinhu chine simba, pinda chinongedzo chechipo nekuti iwe uchave nesarudzo yekuwedzera iyo RAM, huwandu kana kunyange ruvara.
Yakanyanya kusanganiswa: Microsoft Surface Pro 7
12,3-inch 2736 × 1824 pixel resolution LCD skrini
Magnetic keyboard dock (isina kubatanidzwa)
Kuedza kweMicrosoft kwechitanhatu kugadzira piritsi rine simba relaptop ndiyo yakanyanya kunaka parizvino. Ipiritsi rinokurudzirwa kuti riite zvibereko, nokuti panguva ino yakabatanidza 12-inch skrini, ichinyatsosiyanisa tablet iyi itsva kubva kuchizvarwa chekutanga uye chechipiri chemhando dzePro. kugara pasi.kunyanya kushomeka. Nderipi raive dambudziko neshanduro dzakapfuura kana ukaedza kudzishandisa seyako yakajairika laptop.
Kana, nekuwedzera, iwe ukawedzera hwaro hweiyo magineti keyboard, isu tine chokwadi chekuti vazhinji vako vanozokwanisa kugara nePro Surface 7 sechinhu chinotakurika. Nekudaro, iyo base inodhura yakatenderedza € 190 yakawanda, saka iwe zviri nani ita shuwa kuti unoida usati waitenga. Nehungwaru hwayo hune simba, iyo Pro Surface 6 ndiyo kirimu yemapiritsi. Kunze kwekuva tablet, ikombiyuta chaiyo.
Yakanyanya kutamba: Nvidia Shield
Ultra-inokurumidza Quad Core Nvidia Tegra K1 2.2 GHz processor
8-inch 1920 x 1200 pixel resolution kuratidza
Optional wireless game controller uye chivharo
Iyo Nvidia Shield Tablet ndeye mbiri-mu-imwe: hombe 8-inch Android piritsi raunogona kuita ese akajairwa mabasa naro, asi zvakare inoyevedza Android handheld game console kana yasanganiswa neyesarudzo isina waya controller. Uyu mutongi ndiye kiyi, kunyangwe iyo ine simba Nvidia Tegra K1 processor zvakare inovimbisa kuti mitambo inotaridzika zvakanaka pa8-inch skrini.
Asi handizvo zvoga. Kubuda kwayo kweHDMI kunoreva kuti unogona kubatanidza piritsi rako kuTV kuti utambe mitambo pachiratidziro chikuru, uye inewo TV screen mode kuti zviite nyore. Iyo Nvidia Escudo (Shield) ndeimwe yemapiritsi ekutanga kuwana iyo update ye Android 5.0 Lollipop, yazvino vhezheni yeAndroid yemafoni uye mahwendefa. Ipiritsi rinokurudzirwa kutamba. Yekupedzisira yakakura ficha ndeye yakanyanya kufa-yakaoma PC gamers: kugona kwayo kutamba mitambo yemavhidhiyo kubva paPC kuenda kuhwendefa.
Kana uchida mitambo, iyi ndiyo tablet yako. Isu takatotaura nezvazvo mukuenzanisa kwe mapiritsi ekutamba kana uchifarira.
Ndeapi maficha anofanirwa kuve neyakanakisa piritsi?
Iye zvino ndiyo nguva yekutenga tablet. Maitiro ekusarudza haasi nyore, nekuti iwe unofanirwa kufunga nezve zvimwe zvinhu. Aya ndiwo maitiro ayo akanakisa piritsi anofanira kutevedzera, kuitira kuti ive neiyi label yeyakanakisa piritsi. Saka kuti ive iyo yakanakira sarudzo yemushandisi. Zvinhu izvi zvichakurukurwa pazasi.
Zvine musoro, iwe unofanirwa kuve wakajeka nezve mashandisiro aunoda kugadzira piritsi. Nokuti izvi zvinogona kuita zviyero zvinozodiwa kuti zviite iyo yakanakisa piritsi vachasiyana. Asi pane kazhinji kazhinji zvinhu zvausingafanire kurega chero zvakadaro.
Hapana anoda piritsi ine hupenyu hupfupi hwebhatiri. Nechikonzero ichi, kuzvitonga kunogara kuri chinhu chaunofanirwa kunyatso teerera. Kwete chete simba rebhatiri rine pesvedzero mupfungwa iyi. Iyo yekushandisa system, customization layer uye mhando yezvishandiso zvinoshandiswa zvichavewo nechikamu chikuru chebasa rekuzvimiririra kwemuenzaniso wega wega.
Iwo achangoburwa mamodheru, ane achangoburwa Android vhezheni, akavandudza mune izvi. Chimwe chinhu chinobvumira kuzvimiririra kukuru kwemapiritsi. Nezve huwandu hwebhatiri, zvakakosha kufunga nezve mashandisiro achaitwa naro (kutandara, basa, kudzidza ...) asi bhatiri rinosvika 6.000 mAh Zvingave zvinokurudzirwa, kana iwe uchida kuishandisa kwemaawa akawanda pasina matambudziko akawanda.
Muchikamu chino, iwe unofanirwa kutora akasiyana maficha kuti usarudze yakanakisa piritsi. Kune rumwe rutivi, zvakajairika kusarudza pakati imwe piritsi ine chete WiFi uye imwe ine 4G / LTE uye WiFi. Sarudzo inoenderana nekushandiswa kwaunoda kupa, kunyangwe chinhu chakajairika ndechekuti piritsi ine WiFi inogara ichizadzisa zvinopfuura zvakakwana. Mukuwedzera, idzi shanduro dzinowanzova dzakachipa mumhando dzakawanda.
Kune rumwe rutivi, Bluetooth chinhu chinogara chiri muhwendefa. Saka hachisi chinhu chekunetsekana nacho. Chii chinogona kushanduka ishanduro inoshandiswa. Mumamodhi achangoburwa yatove Bluetooth 5.0. Kunyangwe zvakajairika kuwana mahwendefa anosvika neBluetooth 4.2.
Zvakakosha zvikuru munyaya iyi ndiwo maports akati tablet achava nawo. Kana ukaronga kutenga piritsi rekuvaraidza, zvakakosha kuti kune 3.5 mm headphone jack, chimwe chinhu chisina mamodheru ose nhasi. Saka iwe unogona kuteerera mimhanzi kana kuona mafirimu pahwendefa rako nemahedhifoni. Kune rimwe divi, iyo USB kana micro USB chiteshi kazhinji chinhu chinogara chiripo. Zvichienderana nemhando kana rudzi, zvinogona kusiyana.
Zvakare kuvapo kweiyo slot yekuwedzera microSD chinhu chisingafaniri kuraswa. Kunyanya sezvo mahwendefa mazhinji aine mwero mukati mekuchengetedza, asi nekuda kwe microSD yakati, unogona kuwedzera zvakanyanya. Nehurombo, haasi ese mahwendefa pamusika ane mukana uyu. Saka iwe unofanirwa kuchenjerera pazviri, kusarudza modhi inopa izvi.
Mikana yekubatanidza keyboards
Khibhodi inogona kukubvumidza kuti ushandise zvirinani piritsi. Naizvozvo, zvakakosha kuti munhu akwanise kubatana. Kunyanya kune avo vashandisi vane Kufunga kushandisa piritsi rakataurwa panguva yebasa kana kudzidza. Muchiitiko ichocho, panofanira kugara kune mukana wekubatanidza keyboard kune tablet, kuitira kuti iwe ugone kushanda zvakanaka nayo.
Haasi ese mahwendefa pamusika anopa mukana uyu. Pakati uye yakakwirira siyana zvakajairika kukwanisa kubatanidza keyboard. Kunyangwe iwe nguva dzose unofanirwa zvitarise mune zvakatemwa Zvimwe chete. Kuti zvizivikanwe kuti uri kutenga piritsi rinotipa mukana uyu.
Kugona kubatanidza peni kutora manotsi
Chimwe chinhu, icho chakakosha zvakare muchiitiko chaunoronga kushandisa iyo piritsi kudzidza kana kushanda. Peni, seS-Pen paGalaxy Note smartphones, inogona kubatsira zvakanyanya. Inobvumira kutora manotsi nyore pahwendefa chero nguva. Mamwe emhando yepamusoro anouya nepeni yatove yakabatanidzwa, kunyangwe isiri nguva dzose.
Asi zvakakosha kuve nekugona uku. Sezvo inogona kubvumira kushandiswa zviri nani kweyakataurwa piritsi pane dzakawanda zviitiko. Saka ichi chinhu chekuteerera kana uchitarisa kune yakatarwa piritsi iwe yauri kufarira. Uyewo funga nezvemitengo yemapeni aya aunowanzoda kutenga zvakasiyana.
Mazhinji emapiritsi pamusika anouya ne Android seyo inoshanda sisitimu. Nyangwe mamwe acho ane inonzi PC mode, anozivikanwa nemapiritsi eSamsung eGalaxy, ayo ane. Inogona kubatsira zvakanyanya kana uchifanira kushanda, kunyangwe neimwe nzira iri nzira inoita kunge yarasa kukosha.
Muchokwadi, tinozviona pane Samsung zvigadzirwa kazhinji, asi mamwe akawanda mabhureki haana iyi modhi. Inogona kubatsira zvakanyanya kune vashandisi vehunyanzvi. Nokudaro, kune vanhu ava chinofanira kuva chimwe chinhu chokufunga nezvacho, kana vachitenda kuti chinogona kuvabatsira kushandisa zviri nani tablet yavo.
Ratidza panel uye resolution
Nezve tablet panel tekinoroji, yakanakisa sarudzo ndeye OLED. Hunhu huri nani, kushandiswa kwesimba kwakaderera nekuti mapikseli matema akadzimwa, uye kubata kwakanaka kwemavara. Hapana mubvunzo kuti ndiyo yakanakisisa sarudzo munyaya iyi. Kunyange zvazvo inogona kuwanikwa chete mumapiritsi epamusoro-soro. Saka mitengo inowanzokwira. Asi iwo hunhu hukuru kana zvasvika pakudya zvirimo uye kushanda pazviri.
Screen resolution inogara iri chinhu chakanaka chekuteerera. Zviripachena, chinangwa chekushandiswa kwehwendefa iri kunofanirwa kuverengerwa. Asi mupfungwa iyi, Full HD resolution ndiyo shoma. Mune mamwe mapaneru eOLED pane kunyange 4K resolution kana zvasvika pakutamba zvemukati. Ichakubvumira kuti unakidzwe zvizere nehwendefa mumhando idzi dzezviitiko.
Chekupedzisira, saizi yechidzitiro chimwe chinhu chisingakanganwike. Mahwendefa mazhinji nhasi lDzinouya muhukuru hwakapoteredza 10 inches. Iyo yakanaka saizi yakazara, zvese zvekuona zvirimo uye kushanda. Kunyangwe zvichienderana nezvido zvemushandisi, mhando dzinogona kuonekwa dzakati kurei (anenge 12 inches) kana kuti diki, pakati pe7 ne9 inches.
Iyo processor chinhu chakakosha, asi inofanirwa kugara ichibvunzwa mumamiriro ezvinhu. Iyo piritsi processor haitauri chero chinhu. Iwe unofanirwa kutarisa kusanganiswa kwayo ne RAM uye yekuchengetedza mukati. Nenzira iyi tinogona kuziva kana piritsi racho richizonyatsowana zvakanyanya kubva pane iyi processor.
Zvigadzirwa zvemahwendefa zvinoshandisa iwo ma processors atinoona mu Android smartphones. Takasangana na Snapdragon processors, kuwedzera kumhando dzeSamsung's Exynos uye Huawei's Kirin. Iwo marenji ekwavari akafanana, saka anotipa zano rekuita kwatinogona kutarisira kubva kune aya ma processor mumahwendefa.
Iwo ane simba zvakanyanya ndeaya eiyo Snapdragon 800 renji (845 uye 855 iyo ichangoburwa) uye Samsung's Exynos, iyo inoshandiswa mumapiritsi emhando, kazhinji iyo 9800 inopa simba rakakura, mukuwedzera kune yakaenzana simba rekushandisa. Kunyangwe isu tichizoona aya ma processor chete mumhando yepamusoro. Saka ivo vanozonyanya kudhura, asi ivo pasina kupokana ivo vakanyanya kunaka kune piritsi.
Mundima iyi, kushandiswa kwehwendefa kune danho kana uchifunga nezvehushoma huwandu hwe RAM inodiwa. Kune vashandisi vari kutsvaga piritsi rekuzorora chete, 2 GB ichave yakakwana, 3GB inogonawo kutariswa kana mutengo usina kunyanya kuwedzera. Asi neinenge 2 GB ye RAM ichapa kushanda kunodiwa nehwendefa pasina matambudziko akawandisa.
Kana iwe uchitsvaga piritsi rekushandisa kwakawanda, zvese basa nekuzorora, saka 4 GB ye RAM ndiyo shoma. Sezvo izvi zvichizotitendera kuti tiite multitask nguva dzese, ita akati wandei avhure panguva imwe chete pasina piritsi iri kuparara kana kushanda zvakanyanya. Icho chinhu chinofanirwa kuverengerwa nguva dzose, kana chichizoshandiswa kune akasiyana mabasa. Nekuti kushanda kwakatsetseka kwayo kwakakosha, uye inozowanikwa kana uine aya 4 GB ye RAM.
Iyo yekuchengetera yemukati inowirirana zvakanyanya neyakapfuura. Zvakare, kana piritsi racho riri rekuzorora, vane 16 kana 32 GB yekuchengetedza ichapa kushanda kwakanaka kune vashandisi. Ichakubvumidza iwe kushandisa piritsi, kurodha maapplication uye kuona zvirimo pasina dambudziko. Chinhu chakakosha ndechekuti iwe une mukana wekuwedzera iyo yati yekuchengetedza uchishandisa microSD, kuitira kuti igare ichiwedzerwa kana nzvimbo iripo isina kukwana.
Kana ichizoshandiswa kubasa uyezve kutandara, iyo shoma ndeye 64 GB yekuchengetedza. Saka kuti zvinyorwa uye marudzi ese emafaira anogona kuchengetwa mairi. Kunyangwe iwe zvakare uchifanirwa kupa mukana wekuwedzera iyo yati chengetedzo uchishandisa microSD, sezvo zvakanyanya kushandisa zvinogona kukonzera kuti pakupedzisira nzvimbo yacho haigare yakakwana pahwendefa.
Makamera ari pahwendefa anowana kukosha nekufamba kwenguva. Kunyanya sezvo vanogona kuiswa kune zvakawanda zvekushandisa. Kwete kungotora mapikicha navo. Iyo yekumberi inogona kushandiswa mumavhidhiyo mafoni, chiri chinhu chakakosha muhwendefa kushanda. Nepo kuseri kuchigona kushandiswa kuongorora magwaro, ayo anogona zvakare kubatsira zvakanyanya.
Chinhu chakajairika ndechekuti mumapiritsi epamusoro-ekupedzisira, kunyanya aya eSamsung, mune makamera makuru. Saka chinhu chekuchengeta mupfungwa kana uri kutsvaga tablet yakakwana nemakamera akanaka kuti uwane zvakawanda kubva mazviri.
Mhedziso pane iyo yakanakisa piritsi
Sezvatakakuvimbisai munhanganyaya yechinyorwa chino, chero chaunoda iwe uchawana yako yakakodzera piritsi pakati pezvatinorumbidza. Saka iwe hausisina chikonzero: funga nezvezvauchashandisa piritsi rako, enzanisa mitengo uye enda kwairi!
Isu tinoedza sei mahwendefa akanakisa?
Gore rega rega tinoongorora mazana emapiritsi (mamwe akanaka uye mamwe asina kunaka), izvo zvinotipa kunzwisisa kukuru kwezvinoita kuti piritsi rive rakanaka chaizvo, nepo richitibvumira kuenzanisa seyakaenzana. Isu tinoshandisa imwe neimwe yemapiritsi atinoongorora sezvawaizoda, asiwo Isu tinovaedza kuti vaenzanise mashandiro avo - ingave processor yavo, skrini, kamera kana bhatiri. Zviyero zvedu uye mibairo yakavakirwa pamusanganiswa wezvimiro zvehwendefa, nyore kushandisa, uye mutengo.
Zvinhu zvakakosha zvakaita sedhizaini, mhando yechidzitiro, hupenyu hwebhatiri uye kukosha kwayo zvinoumba huwandu hwezvibodzwa uye chikamu chakakosha chekufunga kuti piritsi rinofanira kunge riri mune yedu runyorwa rwezvakanakisa. Tsvaga piritsi rako rinokurudzirwa mune ino wongororo iyo inotora nguva yakareba, yakadzama wongororo muakaundi uye inopfupisa ivo muchidimbu. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve chaiyo piritsi, ingo dzvanya pane iyi link kuti uende kuzere wongororo.
Rondedzero yedu inosanganisira piritsi yezvese zvinodiwa. Asi kana uchiri kuda rubatsiro kusarudza kuti ndeipi piritsi yakanakira iwe, unogona kuenda kune yedu Kutenga gwara. Ichakutungamira kuburikidza neakasiyana sarudzo uye tsanangura iyo jargon yauchasangana nayo.
Zvakapesana, kana iwe uchitova nepfungwa inonzwisisika yezvaunoda, ingoenda kumberi kuti uone kusarudzwa kwedu kwemahwendefa epamusoro pamusika.
Mahwendefa akadhura » Inotungamirira » Ndeipi hwakanakisisa piritsi?
5 pfungwa pa "Ndeipi piritsi yakanakisisa?"
Pamusoroi, chii chaungandiudza nezve mahwendefa eSony z?
2017-06-30 at 8:59 am
Zvakadini naEmanuel, unoona isu tichiri kuburitsa ongororo itsva yataita yakakwana pane sony xperia z4 kana iri iyo yauri kureva. Mumazuva maviri unenge waburitsa 😉
2017-06-07 at 1:36 am
Mhoro ndinoda kutenga piritsi rekushandisa zuva nezuva, rakanaka risingadhure, nderipi raunokurudzira? Sezvo ini ndisingazive, ndatenda
2017-06-30 at 2:14 am
chinyorwa chakanaka kwazvo, chakandishandira zvakanyanya uye ndakadzidza zvinhu zvakati wandei, makorokoto.
2017-06-10 at 4:45 pm
Kunyangwe usina kutiudza mutengo, iyo Huawei Mediapad T5 inogona kunge iri sarudzo yakanaka yekukosha kwemari.